Digital Patrika – मधेसी मोर्चाले हैसियत बिर्सदा …
मधेसी मोर्चाले हैसियत बिर्सदा …
Feb 04, 2016digitalpatrikanone, डिजिटल खोजी0
आन्दोलनमा साथ/सहयोग जुटाउन चार दिनदेखि विहारमा व्यस्त रहेका मधेसी मोर्चाका नेता स्वदेश फर्किएका छन् । लालुप्रसाद यादव, रधुबंशप्रसाद सिंह, सुशील मोदीलगायतको ढाडस बोकेर फर्किए पनि मोर्चाका नेताको जाँदा भन्दा फर्किदा ‘कद’ घटेको छ । आन्दोलनमा स्वदेशी/विदेशी साथ/सहयोग खोज्नु स्वभाविक भएपनि विहार यात्राले दिएको सन्देश मोर्चाकै लागि पनि सुखद नहुन सक्छ ।
विहार यात्रा गर्ने मधेसी मोर्चाका तीनै जना नेता नेपालका पूर्व मन्त्री र फरक–फरक पार्टीका अध्यक्ष हुन् । उपप्रधानमन्त्री भइसकेका उपेन्द्र यादव त प्रधानमन्त्रीका संभावित उम्मेद्वार नै हुन् । राजेन्द्र महतो र महेन्द्रराय यादव पनि राष्ट्रिय हैसियत बनाइसकेका पात्र हुन् । लालूप्रसाद यादव भारतका पूर्वमन्त्री र क्षेत्रीय राजनीति केन्द्रित एक दलका अध्यक्ष हुन् । यस मानेमा उपेन्द्र, राजेन्द्र, महेन्द्र र लालूमा फरक–फरक देशको नागरिक हुनु बाहेक तात्विक अन्तर छैन । तर, नेपालका यि नेताले भारतको एउटा प्रान्तका नेतासँग जेजस्तो गतिविधि देखाए त्यो पाच्य छैन । बेतको कुर्सीमा बसेका लालूको पटाङ्गिनीमा प्लाष्टिकको कुर्सीमा नेपालका राष्ट्रियस्तरका नेता अलि पर टुसुक्क बसेको यो दृश्यले आन्दोलनकारीको उत्साह कत्तिको बढाउला÷घटाउला ? लालूले छोइउला कि जसरी नेपाली नेतालाई परै राखेर केही सन्देश दिन खोजेका होलान्/नहोलान् ?
मोर्चाका नेताह?ले आफ्नै आङ कन्याएर छारोसमेत उडाएका छन् विहारमा । समस्या समाधानका लागि वार्ताप्रक्रिया चलिरहेका बेला उपेन्द्रहरुले नेपालको संविधानप्रति भारतीय भूमिका जसरी कु–प्रचार गरे त्यो ‘राष्ट्रघात’ नै हो . संविधानप्रति चित्त नबुझ्नु, संशोधन पनि अस्वीकार गर्नु, त्यसैलाई मुद्दा बनाएर आन्दोलन गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नै हो । तर, संविधानले मधेसीको नागरिकता खोस्यो, भाषा, पहिचान, सरकारी सेवा सबै–सबै खोस्यो, मधेसीलाई विदेशीको जस्तो व्यवहार गरियो भनेर विदेशीलाई ‘बिन्ती विसाउन’ उपेन्द्रको कटौलेपन मात्रै हो ।
नेपालको संविधानप्रति नेपालीले मात्रै बहस, टिप्पणी÷प्रतिटिप्पणी गर्न सक्छन् । राजनीतिक सहमति भयो भने लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गरी नयाँ लेख्न पनि सक्छन्, संशोधन गर्न पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले जान÷अन्जानमा संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान ठीक छ÷छैन भनेर बहस गर्ने वातावरण बिहारीलाई जसरी बनाइदिए, त्यो पनि राष्ट्रघात नै हो । नेपालको संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध बोल्नसम्म नमिल्ने विहारी नेता संविधानलाई ‘राष्ट्रघाती’ भनिरहेका छन् । र, यसरी विहारी नेता ‘बक्न’ू मा उपेन्द्रहरु मुल दोषी हुन् ।
संविधान संशोधनपछि दिल्ली ‘दूर’ हुँदा मधेसी मोर्चाका केही नेता बिहारमा यसरी ‘लम्पसार पर्नु’ले आन्दोलनमा केही शक्ति आयात गर्न सहयोग त गर्ला । तर, त्यो कालान्तरमा मधेसकै लागि प्रत्युदपादक हुनेछ । मधेसका जायज माग पूरा हुनुपर्छ भनेर साहानुभूति राख्ने गैर–मैदानी भेगका नागरिकलाई पनि यो निर्लज्ज नाटकले निरास बनाएको छ । उपेन्द्रहरुको यो हर्कतले राष्ट्रभक्त मधेसी नागरिकलाई पनि पक्कै दुःखी बनाएको हुनुपर्छ । मझेरी खनेर आंगन पुर्ने मधेसी मोर्चाको यो गल्तीको मुल्य मधेसले मात्रै होइन सार्वभौम नेपालले नै चुकाउनु पर्ने छ ।